I-35 I-GORGEOUS KITCHEN PENINSULA IDEAS (IMIFANEKISO) - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi I-35 I-Gorgeous Kitchen Peninsula Ideas (Imifanekiso)
I-35 I-Gorgeous Kitchen Peninsula Ideas (Imifanekiso)
Le galari ibonisa iingcinga ezintle zepeninsula yekhitshi evela kwiindlela ezahlukeneyo zoyilo. Usingasiqithi osisiseko esiqhagamshelene nodonga lwekhaya. Ubume bekhitshi abanele ngokwaneleyo ukuba bume bodwa bodwa bungaxhamla ngokongeza usingasiqithi. Oku kunokubonelela ngendawo eyongezelelweyo yokubala yokulungiselela ukutya kunye nokutya-ekutyeni. Apha ngezantsi kukho uluhlu lweendlela zekhitshi ezineepeninsula zokukunceda ufumane eyona ilungileyo kwisitayile sakho.
Lo mfanekiso ungasentla unekhitshi elihle lekhabhathi yekalika enepeninsula yokusonga. Ukuhonjiswa okuhonjisiweyo kunye nophahla oluneenkcukacha lwetreyi kunika umbono wokuphakama kwisithuba ngelixa izibane zefolokhwe ezijingayo kunye nezibane ezikhanyisiweyo zinika ukukhanya okuninzi. Iinkcukacha zokugqibela eziphezulu ezinje ngeplanga yomthi weplanga kunye nokugqitywa kwetsheri kunye nezinto zombane ezingenazintsimbi zenza ukuba esi sithuba sibonakale. Indawo ekude yokutyela ibonelela ngamathuba amaninzi okuzonwabisa kunye nokuqokelela kwindawo ekhitshini.
Ikhitshi yintliziyo yekhaya. Sonke siyazi kakuhle ukuba ikhitshi lithathwa njengeziko lendlu kuba ayisiyondawo apho sitya kuphela, kodwa ikwayindawo yokuba sihlanganisane silusapho kwaye sidibane nabahlobo. Ngoluhlu olubanzi lwemisebenzi eyenzeka ngaphakathi ekhitshini, kufuna ukucwangciswa ngononophelo ukuqinisekisa eyona nto ibekiweyo kunye nokusebenza esinokukufumana.
Kukho iindidi ezininzi zezakhiwo zekhitshi esinokukhetha kuzo ezizezi: ikhitshi emile u, ikhitshi emile njengo-L, ikhitshi elinegali kunye nekhitshi elinye lodonga. Olu lwakhiwo lunokuhlengahlengiswa ngokongeza ipeninsula okanye isiqithi ukuze kwandiswe yonke intshi yendawo yekhitshi.
L Ikhitshi elimile kunye nePeninsula
Ikhitshi elimile kunye nePeninsula
Ikhitshi elincinci elinePeninsula
Ipeninsula yasekhitshini enezihlalo
Uyilo lomxholo oluvulekileyo luvumela le peninsula ende ende ende emile okwekhabethe emhlophe yekhephu ukudala ukwahlula phakathi kwekhitshi negumbi lokuhlala. Imigangatho emhlophe ye-oki ephuma ekhitshini yonke indlela eya kwigumbi lokuhlala, idityaniswa kakuhle netoni emnyama hi-gloss flat panel cabinetry. Uyilo lwejometri yethayile yokubuyela umva kudala iskim kunye nokuyilwa kwesikimu esiqhelekileyo.
yeminyaka yesihlanu isipho somtshato
Ayongezi kuphela ixabiso lobuhle ekhayeni lakho, kodwa sisisombululo esisebenza ngokukuko ukuphucula iimeko zokusebenza ekhitshini. Zombini zinokusebenza ngokufanayo kwaye zinokungafaniyo ngokubanzi. Kodwa sazi njani ukuba isiqithi okanye usingasiqithi ulungele ngakumbi ikhaya lakho?
Isiqithi sisongezo esisebenzayo ekhitshini esidla ngokufumaneka embindini wekhitshi. Ikwasebenza njengesiqwengana esimangalisayo ngenxa yoluhlu olugqityiweyo olunokuthi lunikezwe. Iziqithi zisebenza ngokusemagqabini ngeendawo ezinkulu ezinokulungiselela ikhawuntari yokusebenza ngokuzimeleyo eyahluliweyo kulwakhiwo esele lukhona ekhitshini.
Xa kongezwa kwi Uyilo lwekhitshi olunemilo engu-L Iphakamisa indawo kunye nokunxibelelana ngokuyalela ukuhamba komsebenzi kwindlela eya kwi-4 indlela.
Le khitshi yanamhlanje isebenzisa uyilo oluvulekileyo olubandakanya ithoni emnyama yeplanethi yekhabhathi yokugqitywa kweenkuni kunye neepaneli zodonga ezonyukela phezulu kwisilingi incoma uphahla oluphezulu. Itafile ye-quartz emhlophe kunye nosiba lwengxangxasi olulinganisa isikimu sombala wale mihla. Umgangatho wemarble opolishiwe, izixhobo zentsimbi ezingenasici, ifenitshala yokutyela yale mihla kunye nezitulo zebar zigqiba indlela yesimbo yanamhlanje.
Uyilo olumiliselwe i-L olune-peninsula ngokubanzi lunobume obunodonga olunye lweekhabhathi ezine peninsula eyakha indawo yokuhlala. Olu luyilo lubonisa i-peninsula ye-bar ephakanyisiweyo yaphambi kwegumbi lokuhlala. Ikhitshi ngokwalo lenzelwe iikhabhathi ezimhlophe zewadibhodi, ukutyibilika kweenkuni kunye nodonga lwebhodi yebhodi yokuyila.
Xa isetyenziswe kulwakhiwo olumilise u-U, lufinyeza umgama phakathi kwezikhululo ezahlukeneyo zekhitshi. Inkqubo ye- Isiqithi sasekhitshini inokusetyenziswa njengekhawuntara yokusebenza eyongezelelweyo, indawo yokutyela engekho sikweni okanye indawo yokugcina eyongezelelweyo. Ihlala inikwe isinki okanye ngamanye amaxesha ibhlokhi yokuxhela okanye indawo yokuxolela ukulungiselela imisebenzi ekhethekileyo.
Usingasiqithi, kwelinye icala, ngokusisiseko sisiqithi esidityanisiweyo nelinye lamacala ancanyathiselwe eludongeni. Idibanisa kwikhitshi emile okwe-U okanye ekhitshini emile njengo-L kwaye inokusebenza kwinjongo enye nesi siqithi sinayo.
Ngokungafaniyo nesiqithi, ipeninsula iyasebenza ngakumbi kwiindawo ezincinci kuba ayidingi ndawo yomgangatho ekufakweni. Isebenza kakuhle ekuphuculeni zonke iintlobo zobeko lwekhitshi kwaye inokuqhotyoshelwa kuyo nayiphi na indawo ekhoyo yekhitshi lekhitshi. Iphucula ukujikeleza nokuhamba kwezithuthi kumacala amathathu okwenza umsebenzi usebenze ngakumbi.
Ikhitshi usingasiqithi unokubonelela ngemisebenzi eliqela njengokulungiselela ukutya, indawo yokupheka, indawo yokuhlamba, indawo yokutyela engekho sikweni, ibhari okanye Isidlo sakusasa . Ingasetyenziselwa ukufaka ikhabhathi eyongezelelweyo kunye nokwandisa ukugcinwa. Ikwasebenza kakuhle ngokwahlulahlula izicwangciso ezivulekileyo ezahlula ikhitshi kuzo zonke ezinye iindawo endlwini.
Ukujongwa kwesi sixeko, eli khitshi linemifanekiso yeefestile ezizisa ukukhanya kwendalo ngokufanelekileyo kwaye zibonelela ngemvelaphi entle. Le ndlu encinci yanamhlanje ine-Marmara emhlophe yemarble countertop kunye ne-peninsula ye-bar yasekuseni ene-sink-under-mount sink, i-backway tile tile backsplash ekhuphukela phezulu, i-light light flat panel ye-cabinetry kunye neepaneli zangaphambili zeglasi, izixhobo zensimbi ezingenasici kunye nezixhobo zeceramic.
Le khitshi emile njengo-U ibonelela ngosiba olude olunamagumbi amaninzi okuhlala kunye naphantsi kwendawo yekhabhathi. Iikhabhathi ezimbini zetoni zinika usingasiqithi osipeyintiwe okwesibhakabhaka kunye neekhabhathi eziphambili ngombala omnyama. Itafile enkulu emhlophe emhlophe ejonge kwigumbi lokuhlala, isenza oku kube sisakhiwo esisebenzayo kwabo bafuna uyilo lwesicwangciso esivulekileyo ngakumbi ngaphandle kokulahlekelwa yindawo yokubala.
Eli khitshi lincinci langoku eline-peninsula lipakisha ipunch enkulu kwisicwangciso somgangatho wecompact. Ngepeninsula yayo ephakanyisiweyo yesidlo sakusasa yenza indawo efanelekileyo yokutya-ekutyeni okanye ukonwabisa iindwendwe ngelixa ulungiselela okanye upheka ukutya.
Le khitshi emile u-peninsula inezinto ezimhlophe zokwenza iikhabhathi ezimhlophe kunye neefestile zeklasi. I-peninsula ene-countertop ye-bar yokutya kwasekuseni inikeza indawo yokutya-ekudleni.
Ukuba unekhitshi elincinci kwaye ufuna ukwenza ukubalwa kwe-intshi nganye, ikhitshi usingasiqithi lukhetho olufanelekileyo kuwe. Xa kungekho mvume yokongeza isiqithi usingasiqithi uyavakala. Ngokuqwalaselwa ngononophelo akukho mda kwindlela onokuyifumana ngayo ikhitshi lakho langasinga-siqithi ukuze libukeke.
Ukuphakama kuyahlengahlengiswa kwaye akufuneki kuhlala kufuna isiseko esipheleleyo. Nciphisa ukuphakama kwayo ngokuchasene nekhawuntara yekhitshi ekhoyo kwaye ufumana i-nook yesidlo sakusasa eyothusayo ekhayeni lakho okanye ukuba ufuna umahluko, ungayinyusa phezulu ukuze ufumane ibha yokonwabisa iindwendwe.
isangqa sokuzibandakanya esingafaniyo nedayimani
Yifake nge-countertop yeplanga kwaye ngokukhawuleza ufumane isitishi sokunquma kunye nendawo yokulungiselela ukutya. Beka umphezulu wegranite ngaphezulu kwayo kwaye unendawo ekugxilwe kuyo eyahlukileyo ekhitshini lakho. Amathuba anokuphela uyilo lobulumko kunye nokusebenza ngobulumko. Umsebenzi ofuna ukuwusebenzisa ekhitshini lakho lasekhondweni uya kukunceda ufumane izixhobo ezifanelekileyo zokugqiba kwakho.
Uyilo lwekhitshi oluvulekileyo kunye nekhabhathi emhlophe ephakanyisiweyo yekhabhinethi kunye nezixhobo zentsimbi ezingenasici. I-peninsula ye-angled ibonelela ngendawo yokusebenza ngakumbi kwaye yongeza indawo yokonwabisa okanye ukuba ne-snack ekhawulezayo. Izitulo zebar ezithiweyo zinokuhlala abantu abathathu kamnandi ngelixa bencokola kamnandi. Izibane ezixhonyiweyo usingasiqithi usingasiqithi zizibane ezifanelekileyo zokukhanyisa abantwana abenza umsebenzi wabo wasekhaya ngelixa uMama elungiselela isidlo esikhethekileyo sokupheka ekhaya. Umgangatho wethayile omnyama uhlangana kakuhle kunye nemiphezulu yeetafile zemarble kwaye unika eli khitshi ukuba lifudumale kwaye livele ekhaya.
Ikhitshi yotshintsho emile kakuhle eyenziwe ngo-u inempawu zombala zala maxesha ezingathathi hlangothi. Ikhabhathi yethoni emnyama, izixhobo zentsimbi ezingenasici, izibane ezincinane ezifakwa kwiglasi kunye negrey tile egqibezela uyilo lwala maxesha. Ikhawuntara yemabula yeCalacatta Carrara efikelela usingasiqithi isebenza njengendawo yokutyela engekho sesikweni.
Le khitshi yanamhlanje ibonelela ngombala ongwevu nomhlophe ngoyilo olumiliswe u. I-peninsula ibonelela ngendawo yokutya kwaye ifakwe kwi-quartz engwevu. Iindwendwe zinokonwabela ukutya kwazo ngelixa zihleli kwizihlalo ezimhlophe zesikhumba. I-chrome teardrop pendant ukukhanyisa, i-mosaic tile backsplash, kunye ne-white laminate cabinetry zibonelela ngenkangeleko entle kwisithuba.
Uyilo lwekhitshi lwanamhlanje lubonisa usingasiqithi osityikityiweyo ophethe ikhwethi emhlophe ye-quartz ubonakala kuyilo lwesilingi oludibeneyo ngokukhanya okungapheliyo. Iphaneli emnyama yethala lekhabhathi yeglasi kunye neglasi yokutshaya iingcango zekhabinethi zangaphambili ezihambelana nezinto zensimbi ezingenasici, i-chandelier engaphezulu kwetafile yokutya kunye nezitulo zokutyela zangoku kunye nezihlalo zebar. Umbala ongathath'icala ezindongeni nakwisilingi udibanisa ngokugqibeleleyo iikhabhathi zethoni emnyama.
Okungakumbi njenge Isiqithi sekhitshi esinendawo yokuhlala Le peninsula iqhotyoshelwe eludongeni oluxhasayo kolu luhlu luvulekileyo lwengcinga yeloft. Uyilo lwangoku kunye nolweshishini lwale khitshi lubonisa umbala ongathathi hlangothi omhlophe, ongwevu nomnyama, izinto zokuhombisa zesitayile, izixhobo zentsimbi ezingenanto, ifenitshala yanamhlanje eyenziwe ngeglasi, i-chrome kunye nofele. Iphaneli yekhabhathi ethe tyaba, usingasiqithi weengxangxasi kunye nophahla lwenkuni oluphakathi luyagqibezela uyilo.
Ilizwe laseRustic eliphefumlelweyo lasekhitshini linomgangatho ophakathi wokhuni, ukutyabeka ngomthi, i-butcher-block-style countertop, iindonga zezitena kunye ne-backsplash, i-Shaker yesitayile sekhabhathi elungelelaniswe zizixhobo zentsimbi ezingenazintsimbi kunye nezibane zezibane zangoku. Ipeninsula yekhitshi esebenza ngemisebenzi emininzi esinki ibonelela ngendawo yokusebenza engaphezulu kwaye isebenza njengendawo yokutyela engekho sikweni.
Esona sipho silungileyo somyeni kumtshakazi
Olu lwakhiwo lwekhitshi lobume be-F lubandakanya ipeninsula enkulu enezinto ezininzi ezinesinki engaphantsi kwentaba ebonelela ngolwandiso lwesitayile sokulungiselela ukutya, ukutya okungekho sikweni kunye nendawo yokugcina eyongezelelweyo. I-classic medium tone Shaker cabinetry kunye neglasi engaphambili yeglasi, jet (Absolute) emnyama imiphezulu yeetafile lenyengane Umgangatho weethayile ophakathi onxulunyaniswa nezixhobo zentsimbi ezingenasici iphakamisa uyilo lwangoku.
Le khitshi yemveli ineklasikhi emhlophe ephakanyisiweyo ye-inset yekhabinethi, iBoreal granite countertop kunye nethoni ephakathi yomthi. I-chandelier yendabuko ehonjisiweyo ngaphezulu kwesiqithi sasekhitshini ibonelela ngokukhanya okufanelekileyo kokusebenza. Ipeninsula ejikelezileyo enesinki efakwe emanzini ibonelela ngendawo yokusebenza yokulungiselela ukutya.
Yenzelwe incasa yobudoda, le khitshi imodem inezikimu zombala ezingathathi hlangothi zisebenzisa ithoni emnyama yeShaker cabinetry, countertop emnyama eqinileyo, iithayile zomgangatho we-porcelain engwevu, izixhobo zombane ezingenazintsimbi kunye nezihlalo eziphakamileyo ezimhlophe ezinemigca ecikizekileyo nelula. Ipeninsula yasekhitshini idala indawo yokuhlala eyongezelelweyo eyonwabisayo, yokutyela kwaye isebenza njengecandelo elenziwe ngokwezifiso phakathi kwendawo yekhitshi kunye negumbi lokuhlala.
Inkqubo ye- isilingi enefold yongeza ukuphakama nobunzulu kolu lwakhiwo lwekhitshi lwanamhlanje. Ngokudibanisa usingasiqithi, uyilo luvumela ukudityaniswa kwekhabhinethi yokugcina kunye nokwenza indawo yesiqhelo kwisitya sokuhlambela kunye nefriji. Le peninsula ine-countertop ye-quartz kunye ne-sink-under sink ikwasebenza njengendawo yokutyela engekho sikweni kwaye yenza icandelo elihle kweli khitshi. Imigangatho yethoni yokukhanyisa ilaminate iyasincoma ngokugqibeleleyo isikimu sombala ongathathi hlangothi, isilingi kunye nekhabhathi. Iimbane ezihambelanayo zokukhanyisa izibane ezidibeneyo kunye nezixhobo zensimbi ezingenasici kunye nezixhobo.
Uyilo lwekhitshi lwe-rustic lubonisa isitya esitsha se-venetian segolide se-granite esandulela usingasiqithi ojikelezayo, isilingi yeplanga, udonga lwamatye, ithoni ephakathi yekhabhathi yomthi eqinileyo, imigangatho yamatye endalo kunye nezibane ezihamba kancinci ezigqityiweyo ezigqibezela esi sithuba sekhitshi esimnandi.
Le khitshi yesitayile segali inemimandla eyahlukeneyo yokusebenza eyandisa indawo ende yekhitshi. Ipeninsula encinci yenza ikhefu ngaphakathi kwendawo esebenza njengendawo yokutyela kwaye ibonelele ngendawo yokugcina eyongezelelweyo. Iiphaneli zomthi ezihambelana nomgangatho weplanga. Ithoni ephakathi I-Shaker cabinetry kunye ne-Ubatuba granite countertop yongeza ubume kunye nobunzulu.
Le khitshi yesitayile yanamhlanje inemigca ebushelelezi kwaye elula yekhabhathi isebenzisa iingcango zepaneli tyaba, i-jet emnyama yentsimbi, imarble backsplash, izixhobo zentsimbi ezingenasici, ukukhanya kwesibane sangoku kunye nezihlalo zepiston ezinezihlalo zesikhumba. Umgangatho weplanga lomthi wongeza njengezinto zoyilo.
Le khitshi yanamhlanje ebukekayo ayifuni mibala mininzi ukuvelisa uyilo oluhle. Ukukhanya kwethayile ekhanyayo, iikhabhathi zakudala zeShaker, imiphezulu yeetafile emhlophe emhlophe, i-backsplash yethayile yangaphantsi, ipeninsula enesinki engaphantsi kwentaba, izixhobo zensimbi ezingenasici kunye nezixhobo ezigqibezela esi skimu sombala we-monochromatic. Isiqithi esishukumayo esiqengqelekayo kunye neeshelfu ezivulekileyo kwindawo yokugqiba veneer yomthi inika eli khitshi umbala ocacileyo.
Uyilo lwangaphakathi lweRustic lubandakanya udonga lwelitye lokugoba okongeziweyo. Umqadi weenkuni obonakalisiweyo, iphaneli ephakanyisiweyo ephakanyisiweyo yekhabhathi kunye nomgangatho we-oki, i-countertop eluhlaza okwesibhakabhaka efikelela kwi-peninsula elungelelene nezixhobo zensimbi ezingenasici zinika le khitshi ukufudumala nokucoceka ukuziva ulungele ukutya okuphekwe ekhaya.
Le khitshi yesitayile ipholileyo inepeninsula ibonelela ngendawo encinci apho izidlo zinokutya khona kwimiphezulu yeetafile zomthi. I-spruce yomthi weplanga kuyo yonke indawo ibonakala inomtsalane kwaye inika umahluko omkhulu kwikhabhathi emhlophe.
Ezinye zezona zimvo zintle zekhitshi eziphuma kwimfuno yokusebenza ngobume bekhitshi obungaqhelekanga. Olu luyilo lusebenzisa usingasiqithi ojikajikayo ukulungelelanisa nendawo encinci yokuhlala. Uhlobo lwenguqulelo oluphefumlelweyo lwekhitshi lubonisa iindonga ezimnyama ezipeyintiweyo, i-jet emnyama yeplanite, umgangatho ophakathi wethayile kunye nezibane ezikhanyayo zelizwe jikelele. Ukongeza kukho ikhabhathi yephaneli efihliweyo eneengcango zangaphambili zeglasi, izixhobo zentsimbi ezingenasici kunye nezihlalo ezenziwe ngethwathwa ezenziwe ngophahla ukuze zenze icompact kunye nenhle yoyilo loyilo lwekhitshi.
Izithuba ezincinci zinokuzuza ngokucinga ngaphandle kwebhokisi xa kufikwa kwimibono yeepeninsula zasekhitshini. Ukubandakanya usingasiqithi kunye nekhawuntari yeCorian kuyilo lwale khitshi lincinci longeza indawo yokusebenza kunye nemisebenzi njengendawo yokutyela engekho sikweni ngaxeshanye. Isikimu sombala omhlophe weendonga kunye neefenitshala zepaneli ezithe tyaba zilungelelaniswe zizixhobo zentsimbi ezingenanto kunye nethoni ekhanyayo yomgangatho weplanga.
Uyilo lomxholo oluvulekileyo luvumela usingasiqithi wekhitshi omile njengo-L kunye nemiphezulu yeetafile zewayini zegolide zeVenetian zokudityaniswa. Olu luyilo lubonelela ngendawo yokugcina eyongezelelweyo kunye nemisebenzi njengendawo yokutyela efanelekileyo yokonwabisa kwaye yongeza indawo ngakumbi yokulungiselela ukutya. Indawo ekhanyisiweyo ekhanyisiweyo yokukhanyisa kunye nomgangatho owenziwe ngomthi womthi wenza uyilo loyilo lwesiko.
Ikhabhinethi yangaphakathi emhlophe efihliweyo emhlophe ehlengahlengiswe zizixhobo zentsimbi ezingenasici, izibane zeglasi kunye nezihlalo ezimnyama zebala yesikhumba kudala uyilo lwesitayile sangoku. Umgangatho weplanga lomthi ophakathi ubonelela ngombala ogqamileyo kwisikimu sombala we-mono-chromatic. Ukubandakanya ipeninsula encinci kunye ne-quartz countertop, yongeza indawo eyongezelelweyo yokulungiselela ukutya kunye neendawo zokuhlala ezongezelelweyo zokutya.
Le khitshi yesiko lesiko inepeninsula ende ephakanyisiweyo efanelekileyo yokutyela ngokungekho sikweni kwaye ifihla ukulungiswa kokutya kwimbonakalo. Ikwasebenza njengokwahlulahlula phakathi kwekhitshi nendawo yokuphumla. Iphaneli yekhabhathi ephakanyisiweyo enombala okhanyayo weenkuni yenza eli gumbi libe likhulu ngokuqaqambileyo.
I-countertop ye-granite ephothiweyo yongeza ukuthungwa kwaye idibanisa umbala ongathathi hlangothi. Umgangatho wamatye e-travertine wendalo ugqibelele ukugcwala kwabantu ngelixa umgangatho wokhuni kwindawo yokuphumla unika imvakalelo efudumeleyo yasekhaya. Izibane ezixhonyiweyo usingasiqithi usingasiqithi zinika isibane esaneleyo sokutya kunye nokulungiselela ukutya. Isitayela sethuba lesitulo esiphakamileyo songeza ukuqaqamba kwaye indawo yokubasa ilitye ibonelela ngokugxila.
Uhlobo lwendabuko lwekhitshi ephefumlelweyo inemibala efudumeleyo esetyenziselwa iikhabhathi zeenkuni kunye nophahla olungeleleneyo kwizixhobo zentsimbi. Ipeninsula yasekhitshini ene-Santorini emhlophe emele imiphezulu yeetafile inikezela uyilo lwe-chic kwirakhi yewayini kunye nendawo yokupheka eyakhelweyo. Ikwasebenza njengendawo yokutyela engacwangciswanga kwaye ii-barstools ezijikelezisiweyo zongeza indawo yokuhlala eyonwabisayo ngelixa kusenziwa amalungiselelo okutya.
Uyilo usingasiqithi wasekhitshini kunye iikhabhathi zetsheri unendawo yokuhlala ngaphandle kwamehlo. Imiphezulu yeetafile zegranite ezithandekayo zendlovu ezongeza umahluko okhangayo kumbala omnyama wekhabhathi yeenkuni kunye nemigangatho yethayile.
Eli khitshi lincinci lincinci linesakhiwo esimile kakuhle esibonelela ngendawo yokutya-ekutyeni. Esi sithuba sibonisa imiphezulu yeetafile zenziwe ngegolide kunye neekhabhathi ezimhlophe eziphakanyisiweyo kunye nomgangatho wokhuni.
Le khitshi yesitayile sendabuko inesitayile seMonte Cristo granite, ikhabethe elimhlophe leShaker elimhlophe, umgaqo omhlophe ongaphantsi komhlaba kunye neethayile zombala zisetyenziselwa ukubuyela umva, i-porcelain tile flooring, izibane zeglasi ezihonjisiweyo, izixhobo zensimbi ezingenazintsimbi kunye nelaphu elifakwe kwizitulo eziphakamileyo zigqiba uyilo loyilo. Peninsula encinci isebenza njenge nook yesidlo sakusasa.
Le khitshi imhlophe yekhabhathi emhlophe isebenzisa ubeko lwayo oluncinci ngoncedo lwepeninsula ukubonelela ngokulungiselela ukutya kunye nendawo yokutyela. Usingasiqithi uye waphakamisa ibhulakufesi yasekhitshini icala lokutya kunye necala lokupheka elisezantsi. Ikhawuntara yigranite yombala okhanyayo encoma ikhabhinethi emhlophe ethe tyaba kunye nokubumba kwesithsaba.
ukutshata kwimeko entsha york
Umlinganiso wobungakanani bedayimani yokuzibandakanya
Iikhabhathi ezimnyama zoxinzelelo
utshintsha njani ifani yakho ungatshatanga
I-avareji yeendleko ze-dj zemitshato